Izidingo zeYunivesithi yaseTrent | Imirhumo, iiNkqubo, iScholarship, iZikhundla ze2022
IYunivesithi yaseTrent yenye ye Iiyunivesithi zaseCanada ezibonelela ngeenkqubo ezininzi zesidanga sabo bamazwe aphesheya nakwabafundi basekhaya. Kule nqaku, sabelane ngeenkcukacha zonke izinto ezisisiseko ofuna ukuzazi malunga nale yunivesithi njengomfundi onqwenela.
1 IYunivesithi yaseTrent, Canada
1.1 Isikhundla seYunivesithi yaseTrent
1.2 Inqanaba lokwamkelwa kweYunivesithi yaseTrent
1.3 IiFakhalthi zeYunivesithi yaseTrent
1.4 Isifundo kwiYunivesithi yaseTrent
1.5 Izidingo zokungeniswa kwiYunivesithi yaseTrent
1.6 Indlela yokwenza isicelo
1.7 IYunivesithi yaseTrent
1.8 IYunivesithi yaseTrent Alumni
IYunivesithi yaseTrent, Canada
Ngaba ufuna ukuba ngumfundi welinye ilizwe eToronto?
Kumaxesha akutshanje nakweli xesha liphela lobugcisa kwizinto ezintsha, kukho imfuno ekhulayo yeeyunivesithi kwihlabathi liphela ukuze zisebenze ngeendlela ezahlukeneyo ekufundiseni, kuphando nakwindlela yokufunda.
Yiyo loo nto i-21st century yenza ukuba kubalulekile kumaziko emfundo ukuba ahambise ulwazi olubanzi kwaye ayilelwe ukusebenzisa iimodeli zokufunda ezenziwayo ezikhawulezayo kunye neendlela zokuphuhlisa izakhono. Siyazi ukuba le yindlela iiyunivesithi ozikhethile ezibukeka ngayo.
Ewe zikhona, kwaye enye yazo yiYunivesithi yaseTrent.
I-Trent yasekwa ngemizamo yekomiti yabemi enomdla wokudala iyunivesithi ukuze isebenze kwisiXeko sasePeterborough kunye namazwe angqongileyo, namhlanje kufutshane ne-9 000 yabafundi abenza isidanga kunye nabaphantse babe ngama-700 abafundi ababhalise kwikhampasi yasePeterborough ngelixa iYunivesithi yaseTrent iDurham GTA Usebenza ngaphezulu kwe-1 600 yabafundi abasisigxina nabangesosigxina ekhampasini kwiThornton Road eOshawa.
IYunivesithi yaseTrent yiyunivesithi yoluntu enesidima eyaziwayo e-Peterborough, e-Ontario. Ikwanayo nekhampasi yesathelayithi eOshawa, ekhonza uMasipala weNgingqi waseDurham.
I-varsity ikwabizwa ngokuba yimodeli yeekholeji zeOxbridge kunye nobukhulu beklasi encinci - zonke ezifaka igalelo kubume benkampu.
Ngomgangatho wokuqala wobungakanani beklasi yokuqala yama-30, abafundi banandipha iingxoxo ezinobomi endaweni yeentetho zabafundi abangama-300 kwiiyunivesithi ezinkulu.
Umgangatho wokungena ophakathi usezantsi eTrent kunaseyunivesithi ezidumileyo zeOntario, ukuyenza ifikeleleke ngakumbi, kwaye bonke abafundi abanomyinge wokungena ongaphezulu kweepesenti ze-90 banikwa ngokuzenzekelayo isifundi esipheleleyo.
Abafundi baxela imeko yezopolitiko ekhohlo; kwindibano abatsha abaphumeleleyo bayamenywa ukuba bathathe "Isibambiso Esiluhlaza," isithembiso sokukwazi okusingqongileyo kunye noluntu kwikamva labo lomsebenzi.
Imotto: Ukuqinisekisa uzinzo
Iindleko zokuzimasa: $7,300
Amabhaso: $ 5.9-yezigidi
Ngokwezifundo, iYunivesithi yaseTrent ibonelela ngoluhlu olunomdla lweenkqubo kubugcisa nakwisayensi, ubungcali kunye nobungcali njl.
Okwangoku, iyunivesithi ine-8,155 yezifundo zakudala, abafundi be-640 abaphumeleleyo kwaye yongeze iinkqubo ze-50 ze-master kunye ne-PhD. Iikhosi zayo zenzelwe ukuvelisa izakhono ezisemgangathweni kumashishini.
Ikhampasi yaseyunivesithi ilele kummandla weehektare ezingama-460 kwaye ngaphakathi kuyo, izakhiwo zezakhiwo zehlabathi kunye namaziko afana neeholo, ezemidlalo kunye neziko lezempilo, ilayibrari, ibala loluntu njl. Ukongeza, iyunivesithi inekhampasi yesathelayithi eCalgary ebonelela ngeempelaveki nangokuhlwa. izifundo kwizifundo zenzululwazi kunye nolawulo.
Isikhundla seYunivesithi yaseTrent
Imeko engakholelekiyo yokufunda kweYunivesithi yaseTrent, indawo engaqhelekanga yokufunda, ukusebenza ngokuqaqamba kwezemfundo kunye nophando olukumgangatho wehlabathi kuzuze iYunivesithi inqanaba eliphambili kwihlabathi liphela.
Ngapha koko, kwiziko le-2020/21 leZikhundla zeDyunivesithi yeHlabathi (i-CWUR) iTrent ibambe uzinzo kwinombolo 32 kwiiyunivesithi ezingama-96 zaseCanada, ngelixa ibeka i-1237 kumaziko angaphezulu kwe-20,000 kwihlabathi liphela-iindawo ezilithoba ukusuka kunyaka ophelileyo we-1248 isikhundla kunye nomvuzo iyunivesithi indawo ephezulu kwi-6.2 ephezulu yeeyunivesithi kwihlabathi liphela.
Inqanaba lokwamkelwa kweYunivesithi yaseTrent
IYunivesithi yaseTrent yamkela izicelo zokwamkelwa ngenqanaba lokugqibela le-33%. Ngokutsho kohlalutyo lomfundi lwamva nje, ngaphezulu kwe-8,900 yabafundi abafunda kwizidanga zokuqala babhalisela ukwamkelwa eyunivesithi kwiseshoni nganye entsha. Nangona kunjalo, iyunivesithi ayikhethi, ngenqanaba lokwamkelwa kweYunivesithi yaseTrent eqikelelwa ukuba yiyo 85%.
Oku kuthetha ukuba kubo bonke abantu abayi-100 abafaka isicelo, abantu abangama-85 bayakwazi ukufumana ukungena. Izidingo zokwamkelwa eyunivesithi ziphantsi ngokufanelekileyo, ubuncinci besikolo esiphakamileyo semfuno ze-GPA ze-2.8.
IiFakhalthi zeYunivesithi yaseTrent
Iinkqubo zaseyunivesithi yaseTrent ayisiyongcaciso nje kuphela kodwa ziyaziwa ukuqinisekisa ngendawo yokufunda enentsebenziswano kungoko amandla nazo zidlala indima ebaluleke kakhulu ekuqinisekiseni ukugqwesa kwezemfundo. Amandla ayo;
Ulawulo lwezoShishino kwiAccounting.
Ishishini kunye nezobuGcisa.
Izifundo zabantwana noLutsha.
Unxibelelwano kunye nokuCinga ngokuBalulekileyo.
Bona ezinye iinkqubo ezikhoyo kwicandelo ngalinye
Isifundo kwiYunivesithi yaseTrent
Izifundo zesidanga sokuqala kunye nemirhumo yomfundi wasekhaya yile 8,008.41 I-CAD, isifundo samanye amazwe 21,294.1 CAD. Nangona kunjalo, amanqanaba emfundo amiselwa ngunyaka wokuqala umfundi abhalise kwiYunivesithi yaseTrent. Imirhumo yokuhlala, izicwangciso zokutya, iincwadi kunye nezifundo ezizodwa.
Nalu uqikelelo lokufunda kwiinkqubo zokuthweswa izidanga kumazwe aphesheya (ngokusisigxina) ngonyaka we-2020/2021
Ukufundiswa kwezifundo $8,090.87
Umrhumo wokwahlulahlula abafundi $12,294.89
Imirhumo yoNcediso $384.77
Isicwangciso seMpilo ye-TGSA kunye neZinyo (khetha ukuphuma) $458.10
Iirhafu ze-TGSA $117.95
Umrhumo wezothutho (nangona unyanzelekile) $323.47
Itotali yamazwe aphesheya $22,390.05
Jonga uqikelelo lwemirhumo yabo bonke abafundi
Izidingo zokungeniswa kwiYunivesithi yaseTrent
Ngelixa iimfuno zokwamkelwa zahluka ngokwamazwe, Nazi iimfuno ngokubanzi:
IDiploma yeSikolo esiphakeme
Ubuchule boLwimi lwesiNgesi okanye ulwamkelo olunemiqathango ngetrent.
Iimfuno ezithile zeNkqubo.
Thumela iimfuno zesekondari (zokutshintshela abafundi)
Izidingo zokwamkelwa kwiinkqubo zokuthweswa isidanga ziyahluka ngokwamacandelo onke okufunda kwaye kuxhomekeke kubume benkqubo (nokuba kusekwe kuphando olusekwe okanye olusekwe kwikhosi).
Ezinye zeenkqubo zokufunda zifuna ubuncinci beBakala Point Umndilili we-3.0. Nangona kunjalo, abafundi mabaqaphele ukuba isiqinisekiso esincinci asiyi kuqinisekisa ukwamkelwa.
Zonke izicelo zenziwa kwi-Intanethi kusetyenziswa i-portal esemthethweni yesikolo. Ngaphambi kwesicelo, abafaki zicelo kufuneka
Baziqhelanise nohlobo lokufunda, bazi iimfuno zokwamkelwa, kunye neenkqubo zesicelo.
Yiba nentlawulo yokufaka isicelo
Wazi umhla wokugqibela wesicelo
Yiba namaxwebhu axhasayo
Funda imigaqo kunye neenkonzo zesikolo
Ukuba la manyathelo adweliswe apha ngasentla athathwe, nceda ulandele le nkqubo yesicelo sakho
Ukuphonononga iimfuno zokungeniswa kunye nexesha elibekiweyo lesicelo
Ngenisa ifom yesicelo sokwamkelwa
I-Trent International yaBemi beSizwe kunye neeBhaso
NgabaUkungena ekungeneni kwabafundi bamanye amazwe ababonisa impumelelo ebalaseleyo kwizifundo, inkonzo yoluntu, ubunkokeli obunokubakho, kunye neemfuno ezithile zemali. Ukufundiswa kweeScholarships kunye neeBhaso ngokuyinxalenye yokufunda ngemali kunye nemirhumo encedisayo eTrent kwixabiso eliphakathi kwe- $ 2,000 kunye ne- $ 25,000 ngonyaka ngamnye wezifundo (izindlu azifakwanga).
I-Trent International Programme ye-Levy Scholarship
Le ngxowa-mali ixhaswa ngabafundi beYunivesithi yaseTrent ngokusebenzisa irhafu yonyaka. Ngokusekwe kwimpumelelo ephezulu yokufunda kunye nerekhodi eqinileyo yoluntu kunye / okanye inkonzo yamanye amazwe, ubunkokeli kunye nemfuno yezemali.
I-Scholarship igubungela izifundo zamanye amazwe kunye nemirhumo encedisayo emalunga ne- $ 25,000 ngonyaka wokufunda (izindlu ezingafakwanga).
Iikholeji zehlabathi zeTrent-United (UWC)
Ukunikezelwa kumfundi wamazwe aphesheya ongena kwiYunivesithi yaseTrent evela kwikholeji ye-UWC ebonisa impumelelo ebonakalayo kwezemfundo, inkonzo yoluntu, ubunkokeli obunokubakho kunye neemfuno zezemali.
Ixabiso le-scholarship linqunywe kuvavanyo lweemfuno zezemali kwaye lunokwandiswa ukufikelela kwizifundo zamanye amazwe kunye nemirhumo encedisayo emalunga ne- $ 25,000 ngonyaka wezifundo (izindlu azifakwanga).
IYunivesithi yaseTrent Alumni
Phantse i-50,000 alumni kwihlabathi liphela, iYunivesithi yaseTrent ngokungathandabuzekiyo yenye yeeyunivesithi ezidumileyo. Iyunivesithi inoluhlu olubanzi lwenethiwekhi yealumni kumazwe ahlukeneyo.
Ivelise uluhlu lwabafundi ababalaseleyo, abangoovulindlela kumacandelo abo. Ezinye zazo zezi;
UJohn Horgan (iNkulumbuso yaseBritish Columbia),
UChris Hodgson (Umphathiswa weKhabhinethi kaRhulumente wase-Ontario)
UStewart Wheeler (uMmeli wase-Iceland),
UTim Cook (umbhali-mbali),
UNancy Anne Sakovich (imodeli kunye nomlingisi),
UJames Orbinski (Oogqirha ngaphandle kweMida, ophumelele uMvuzo weNobel)
URichard Harrison (Imbongi).
Ngokusisiseko, iYunivesithi yaseTrent iyaziwa ngokukhokelela kuphando, ukufundisa kunye nokwenza izinto ezintsha. Idigri kwiYunivesithi yaseTrent ifunwa kakhulu zizizwe ngezizwe. Inenqanaba lomsebenzi we-96%.
Ukongeza, iyunivesithi itsala abafundi abaninzi abavela kumazwe awahlukeneyo kwikhampasi yayo.
Kuyabonakala ukuba, inqanaba lokwamkelwa kukhuphiswano oluphezulu kakhulu kwaye izifundo ziyafikeleleka.
IYunivesithi yaseLethbridge Canada
IYunivesithi yaseWinnipeg Canada
ILakehead University Canada
IYunivesithi yaseWindsor Canada
IYunivesithi yaseSaskatchewan Canada
Post Previous:I-27 iiyunivesithi eziPhezulu eCanada ngeeScholarships
Okulandelayo Post:Imisebenzi ephezulu eli-15 yeeNjineli zoMatshini